I-GNOMEApps1: Izicelo ze-GNOME Community Core | Kusuka kuLinux
Ukufaka kwe-Linux Post | 12/09/2021 06:00 | Aplicaciones, I-GNU / Linux
Namuhla, sizoqhuba i- ingxenye yokuqala «(I-GNOMEIzinhlelo zokusebenza1) » ochungechungeni lwezihloko ezi-3 ku "Izinhlelo zokusebenza zomphakathi ze-GNOME". Ukuze wenze kanjalo, qala ukuhlola ikhathalogu ebanzi futhi ekhulayo ye izicelo zamahhala nezivuliwe ithuthukiswe yibo, kuwebhusayithi yabo entsha Izicelo ze-GNOME.
Okwalabo abanentshisekelo yokuhlola okwedlule okuthunyelwe okuhlobene ne Aplicaciones ithuthukiswe futhi yamukelwa yi Umphakathi we-GNOME, ungachofoza isixhumanisi esilandelayo kufayela le- Iphrojekthi ye-GNOME CIRCLE, ngemuva kokuqeda ukufunda le ncwadi.
Ngenkathi, labo abanentshisekelo yokubuyekeza okuthunyelwe kwethu kwangaphambilini kuzicelo zomphakathi ze-KDE bangenza kanjalo kusixhumanisi esilandelayo:
Ngemininingwane eyengeziwe futhi ewusizo ku- Izicelo zenziwe ngu- "Umphakathi we-KDE" okulandelayo kungahlolwa isixhumanisi. Noma ukube bekunjalo, mayelana Imvelo ye-XFCE Desktop, Okulandelayo isixhumanisi.
1 I-GNOMEApps1: Izicelo zeKernel
1.1 Izicelo zeKernel - Imisebenzi ejwayelekile yedeskithophu ye-GNOME
I-GNOMEApps1: Izicelo zeKernel
Izicelo zeKernel - Imisebenzi ejwayelekile yedeskithophu ye-GNOME
Kule ndawo ye Izicelo Eziyinhloko, lo "Umphakathi we-GNOME" ithuthukiswe ngokusemthethweni Izicelo ezi-28 okuzoxoxwa ngakho kafushane bese siphawula kwabayishumi bokuqala, futhi sizokhuluma kuphela nge-10 esele:
Isihlaziyi sokusetshenziswa kwediski (i-Baobab): Isicelo esihlola ubukhulu bamafolda nendawo yediski etholakalayo. Isebenziseka ekugcineni ukusetshenziswa kwediski nendawo yediski ilawulwa njengoba ikuvumela ukuthi uhlaziye amafolda athile, amadivayisi wokugcina kanye nama-akhawunti aku-inthanethi.
Amafayela (Nautilus): Imenenja yefayela ezenzakalelayo yedeskithophu ye-GNOME, enikezela ngendlela elula, ehlanganisiwe yokuphatha amafayela nokuhlola uhlelo lwefayela. Ngaphezu kwalokho, isekela yonke imisebenzi eyisisekelo yomphathi wefayela nokunye okumbalwa.
I-GNOME Calculator (Calculator): Isicelo esixazulula izibalo zezibalo. Ungaxazulula kusuka ekusebenzeni okuyisisekelo kwezibalo kuye kokuthuthukile noma okuyinkimbinkimbi, usebenze izindlela ezithuthukisiwe, ezezimali noma ezokuhlela, lapho kuzokhonjiswa khona isethi yamathuba emangazayo.
Ikhalenda le-GNOME (Ikhalenda): Uhlelo oluhle futhi olulula lwekhalenda olwenzelwe ukulingana ngokuphelele kudeskithophu ye-GNOME. Ikhalenda lihlangana kahle kakhulu nemvelo ye-GNOME futhi linikeza ibhalansi elinganiselayo phakathi kwezici ezenziwe kahle nokusetshenziswa okuphakathi komsebenzisi.
Isithombe-skrini se-GNOME (Isithombe-skrini)Isoftware utility evumela ukuthatha izithombe-skrini zesikrini sekhompyutha. Ukuthwebula kungaba kwesikrini sonke, kohlelo lokusebenza oluthile, noma kwendawo ekhethiwe engunxande. Futhi zingakopishelwa kubhodi yokunameka bese zinamathiselwa kwezinye izinhlelo zokusebenza.
Izinhlamvu: Isicelo esisetshenziselwe ukuthola nokufaka izinhlamvu ezingavamile. Ikuvumela ukuthi uthole ngokushesha uhlamvu olufunayo usebenzisa amagama angukhiye. Futhi ngaphezu kwalokho, kuvumela ukuhlola abalingiswa ngezigaba, njengeZiphumlisi, Izithombe, phakathi kwabanye.
Ikhamera yewebhu (Ushizi): Ukuphathwa kwesicelo sedivayisi ye-Webcam. Isebenziseka ngokuthatha izithombe namavidiyo, ukusebenzisa imiphumela ekhethekile yobumnandi, nokwabelana ngendalo yakho nabanye. Futhi, ungathatha izithombe eziningi zilandelana ngokushesha ngemodi yokuqhuma. Futhi sebenzisa i-GStreamer ukusebenzisa imiphumela emihle kulokho okuthwebayo.
Ukuxhumeka kwe-GNOME (Ukuxhumana): Isicelo esinikeza iklayenti lendawo ledeskithophu ekude le-GNOME Desktop Environment.
Oxhumana nabo: Isisetshenziswa seSoftware esigcina futhi sihlele imininingwane yokuxhumana yomsebenzisi. Dala, hlela, susa, futhi uxhumanise amazwibela wolwazi mayelana noxhumana nabo. Futhi, ingeza imininingwane yayo yonke imithombo yakho, inikeze indawo emaphakathi yokuphatha oxhumana nabo.
Amadiski (Disk Utility)- Ithuluzi leSoftware elinikeza indlela elula yokuhlola, ukufometha, ukwahlukanisa, nokulungisa amadiski nama-block block. Ngaphezu kwalokho, ikuvumela ukuthi ubuke idatha ye-SMART, uphathe amadivayisi, wenze izivivinyo zokusebenza kumadiski futhi wakhe izithombe zamadivayisi we-USB.
I-Evince: Umbukeli wombhalo kufayela lamahlaya namafomethi wedokhumenti.
Iso le-GNOME: Isibukeli sezithombe.
Izithombe ze-GNOME: Umhleli wezithombe nezithombe.
I-Gedit: Isihleli sombhalo.
Umphathi wombala we-GNOME: Umbukeli wephrofayili yombala.
Amabhokisi we-GNOME: Umphathi wezinhlelo ezibonakalayo nemishini ekude.
I-GNOME Web: Itilosi leWebhu.
Amamephu we-GNOMEIndawo yendawo esebenzisa imininingwane ehlanganyelwe ye-OpenStreetMap database.
Isimo sezulu: Isibukeli sezimo zezulu nesimo sezulu.
Umculo we-GNOMEIsidlali sefayela lomculo.
Amarekhodi: Isibukeli samafayela wokungena anemininingwane yemicimbi yohlelo.
BukaUhlelo lokusebenza lwewashi, olufaka amawashi omhlaba, ama-alamu, isitophuwashi nesibali sikhathi.
SeahorseIsicelo se-GNOME sokuphatha okhiye bokubethela.
Isoftware ye-GNOMEImenenja yohlelo lokusebenza nezandiso zohlelo.
Isikhumulo se-GNOMEIsicelo sokulingisa seTheminali sokuthola imvelo yegobolondo le-UNIX.
Amafonti we-GNOME: Ibonisa amafonti afakwe kukhompyutha njengezithonjana.
Tour: Isicelo esinikeza ukuvakasha okuqondisiwe nokwamukelwa kwi-GNOME Desktop Environment.
Amavidiyo we-GNOME: Isidlali se-Movie esisemthethweni se-GNOME Desktop Environment.
Ngamafuphi, lokhu kungokwethu ukubuyekeza kokuqala "(GnomeApps1)" kwezicelo ezisemthethweni ezikhona ze- "Umphakathi we-GNOME", ekhuluma nalabo abasemkhakheni we Izicelo Eziyinhloko. Ngakho-ke, siyethemba ukuthi izosebenza ekwaziseni nasekusebenziseni okunye kwalokhu Izinhlelo zokusebenza mayelana ahlukahlukene I-GNU / Linux Distros. Futhi lokhu nakho, kunomthelela ekusetshenzisweni nasekukhulisweni kwezinto ezinjalo ezinamandla nezinhle isoftware yamathuluzi muhle futhi usebenza kanzima Umphakathi weLinuxera usinikeza sonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-GNOMEApps1: Izicelo ze-GNOME Community Core